> Resource > Mac > Macbook Photo Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado Macbook Photos
U baahan tahay caawimo inuu ka soo kabsado Photos tirtiray ka Macbook
Hi oo dhan, aan tirtiray qaar ka mid ah sawirada on my Macbook oo ha loo madhiyo qashinka. Waxaan sameeyey gurmad ah oo ku saabsan hdd dibadda, laakiin aan ku badiyay. Sidaas rajada keliya ee dib u helida photos waa haddii aan iyaga badbaadiyo laga yaabaa ka Macbook. Anigu waxaan rajeynaya Macbook codsiga soo kabashada sawir ah in uu awoodo in uu ka soo kabsado badan oo ka mid ah sawirrada sida ugu macquulsan. Ma jiraa qof wax fikrad ah ama soo jeedin? Caawimaad kasta oo waxaa wax ku oolka ah. Mahadsanid!
Waan ka xumahay in aan maqlo oo ku saabsan khasaaraha. Photos Macbook lagu lumin karaa sabab u tirtirka shil ama musuq-maasuq, jeermiska fayraska ama cillad OS. Runta waxa ay tahay in aad sawiro lumay ayaa weli aad Macbook. Meel ay degan waxaa kaliya calaamadeeyay sida loo heli karo overwritten. Taas macnaheedu waa in aad sida macquulka ah soo kaban karto sawiro tirtiray ka Macbook ka hor xogta cusub iyaga overwrites.
Wondershare Data Recovery for Mac waa codsi soo kabashada sawir Macbook si gaar ah loogu talagalay noocan oo kale ah la isticmaalo. Sidaa daraadeed, waxaad awoodi doontaa inay ka soo kabsadaan sawiro ka Macbook adag drive, USB flash drive, kaararka xusuusta, drive dibadda adag, iwm Marka laga feature fududahay in la isticmaalo, qalab aad bixisaa fursad ay ku eegaan ee photos recoverable ka hor iyaga soo celinta. Waxaad kala soo bixi kartaa version tijaabo ah barnaamijka iyo bilaabaan in ay hadda baarista Macbook!
Qabtaan Macbook Photo Recovery in 3 Talaabooyinka
Tallaabada 1 Select hab kabashada si ay u bilaabaan soo kabashada Macbook sawir
Ka dib markii socda Wondershare Data Recovery for Mac aad Macbook, aad arki doonaa daaqad ku taxan fursado dhowr ah. Waxaad ka arki kartaa tilmaamaha in la doorto ikhtiyaarka ugu fiican soo kabashada aad u. Halkan, aynu dooran "lumay Recovery File" inuu ka soo kabsado tirtiray, formatted ama sawiro laga aad Macbook.
Fiiro gaar ah: Ha dajiyo barnaamij ku adag drive in sawiro aad ayaa laga badiyay ka.
Tallaabada 2 Scan drive adag tahay in la raadiyo images lumay
Barnaamijku wuxuu muujin doonaa drives adag iyo aaladaha kaydinta dibadda on your Macbook. Sidaas oo kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan warqadda drive midig oo guji "Scan" si loo ogaado images lumay. Waxaa fiicnaan lahayd in ay doortaan "image" doorasho on "Select File ture" doorasho in la qeexo iskaanka ah natiijada.
Plus, haddii sawiro aad ayaa formatted, fadlan ku dhacay "Enable Deep Scan" doorasho uu furmo.
Tallaabada 3 Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh ceshan photos Macbook
Scan ka dib, dhammaan photos helo waa la qori doonaa fayl uu furmo. Waxaad awoodi doontaa in ay ku eegaan oo dhan oo ka mid ah si loo hubiyo in sida badan images aad dib u soo ceshano karo.
Markaas kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan sawiro aad rabto oo guji "Ladnaansho" iyaga badbaadiya aad Macbook.
Fiiro gaar ah: Fadlan dooro xijaab cusub ku Macbook in uu kaydiyo ee photos soo kabsaday.